Afro Curly Timaha: Noocyada timaha, Waxyaabaha ugu wanaagsan & Saameynada 2020?
Timaha adkaa ee Afro ama in afro xaaraan ah Fiiri waa mid si weyn u koraya caanimada! Tan iyo markii bilowgii kacdoon timo dabiiciga ah oo ku soo laabtay 2007, ujeedada dabiiciga ah ee dabiiciga ah ayaa ahayd inay timaado meelo waaweyn oo sida ugu suurta galsan! Sidaa daraadeed ku soo afjarida afro jilicsan oo dhan ammaantiisa! Timaha Afro-daradu waa timo dabiiciga ah oo leh qaab qurux badan oo qaab qurux badan leh oo koraya oo ka baxsan afro dhaqameed, laakiin waxay leedahay muuqaal muuqaal ah halkii aad ka muuqan lahayd muuqaal jilicsan. Dabeecadaha qaarkood waxay jecelyihiin in ay qaabeeyaan afkooda si ay u yeeshaan wadnaha halkii afro, oo ah sida quruxda badan.
1 Qalabka Timaha & Calaamadaha Caanka ah
1.1 SIDA AAD U BAAHAN YAHAY SUUQA WAQTIGA AH: ku dhagxiyaan xakamaynta!
2 Sidee loo sameeyaa dhirta dabiiciga ah?
3 KAALINTA CLIP-INS
4 KOOXAHA CAALAMIGA AH EE NABADDA & Wigs
4.0.1 DIYAAR AYAA LAGU DHACAY
4.0.2 Waxaan rajeynayaa inay taasi caawineyso. Ilaa wakhtiga xiga!
Qalabka Timaha & Calaamadaha Caanka ah
Timaha adkaa ee Afro ayaa marwalba la midoobi jiray isagoo qaadanaya sanado si uu u koro nooca 4. Si kastaba ha noqotee, horumarka dhowaan lagu sameeyay wigs, kumbuyuutarrada iyo kordhinta timaha timaha, muuqaalkani marna ma noqon mid dabiiciga ah si uu u jiido. Maaha oo kaliya inaad gaaban tahay oo glam ka hooseysa daqiiqadaha 10, laakiin ma aha wax xajmiga timaha aad ku dhasho. Waxaad ka bixi kartaa Afro Curly fiirin dheerad ah. Haddii aad hore u dabiiciyan, waxaan kugula talin lahaa inaad ku rakibto bogga. Iska ilaali kumbiyuutarrada sida ugu fiican ee timahaaga dabiiciga ah ee dhabta ah sababtoo ah waxaad si sahal ah u xakameyn kartaa habka curlinka ah ee boogta ama bantu, kaas oo aan sharxi doono mar dambe. Haddii aad leedahay hannaanka dhabta ah ee dabacsan sida 3a 3b, way adkaan doontaa in la helo afro jilicsan si aad u eegto haddii timahaagu gaaban yahay. Wixii laydin soo saaro, waxaan kugula talineynaa soodhaweyn dhaqameed iyo xidhitaanka. Ama khadka wabiga ee Nubian. Nidaamka ugu wanaagsan ee loo adeegsado wuxuu noqon doonaa Kinky Curly, Coily ama Afro Kinky ururinta maaddaama kuwan ay ku siin doonaan ugu wanaagsan Afro Curly!
SIDA AAD U BAAHAN YAHAY SUUQA WAQTIGA AH: ku dhagxiyaan xakamaynta!
Habka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo Afro Afrik ugu wanaagsan waa inuu raaco talooyinkan fudud. Waxyaabaha muhiimka ah ee la tixgelinayo markaad sameysid muuqaalkaaga waa inaad xasuusnaato in sabirku yahay ficil. Saamiga koritaankaaga wuxuu u qaataa wakhti (waqti badan iyo waqti badan LOL). Si kastaba ha ahaatee waxaan kuu soo saari doonaa dhowr qarsoodi ah si aad u qaadato ilaa aad ka dhigto! Aynu bilowno
Sidee loo sameeyaa dhirta dabiiciga ah?
Haddii timahaaga dabiiciga ah uu yahay mid aad u dheer oo dhererkiisu badan yahay, qaabkani waa mid aan sahlaneyn in la jiido. Waxaad horey u leedahay dharka 3c ama 4a marka loo eego maydhashada iyo tagitaanku waxay u badan tahay inuu ku filnaado si uu u gaaro qaabkaas. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad haysato 4b 4c timaha, ka dibna way adkaan kartaa gaaro taas oo ah feker wanaagsan oo afro ah. Taa bedelkeeda, waxaad u baahan doontaa inaad sameyso mid ka baxsan ama Bantu knots si loo xakameeyo qaabka lakabkaaga.
Waxaa jira fariin cajalad muuqaal ah oo muujinaya sida loo rakibo Afro kinky adigoo ku dul qoran boggan si loo abuuro dherer dhexdhexaad ah afro hoose!
Tilmaamaha tifaftirka ayaa la raadsaday ka dibe runtii ugu dambaysay ee beelaha African African ah.
Haddii aadan haysan dhumucda ama dhererka si aad u jiiddo afro jilicsan, markaa waxaad marwalba isticmaali kartaa koodhka. Kordhi kordhinta dabiiciga ah ee isku dhafan adiga dhabta ah Taabashada timaha, taasi waa mid aad u muhiim ah; haddii kale, timahaagu si fiican iskuma qasbin. Waxaan ku talin lahaa in dhererka gaaban yahay si markaas timuhu u abuuraan saameyn dhaadheer. 10 "ama 12" wuxuu u shaqeeyaa ugu fiican, waxaadna u baahan doontaa qalabka 1.5-2. Isticmaal cirbadda kareegga oo dhan timahaaga. Hadda waqtigeeda ku habboon oo qaabeeya timaha. Si aad u hesho muuqaalka kakan waxa aad u baahan doontaa inaad isbedesho timo ama aad u sameyso Bantu samee curls bouncy ah. Nadiifi qallalan oo qallalan, oo si sahal ah u isticmaal khafiifinta habeenkii, timo jilciya oo adigoon subaxin. Si kastaba ha noqotee, bootu Bantu waxay abuuraan muuqaalka ugu fiican ee afro-kaca. Burburinta ku saabsan samaynta bantu waa balaastiggu waa inuu waligiis si qallalan ugu qalajiyo si aad u fariisato qalabka wax lagu qalajiyo. Qodobka muhiimka ah ee la tixgeliyo marka la isku dayayo in la helo isbeddel fiican oo la eegayo waa in laga fogaado kareem culus oo culus. Tani waxay xaqiijinaysaa inaad yareynayso xayiraadda iyo u oggolaato timahaaga Afro ee aadka u jilicsan si aad u noqoto mid aad u badan oo loo maareeyn karo qaabeynta.
KOOXAHA CAALAMIGA AH EE NABADDA & Wigs
Habka ugu fudud ee ugu haboon ee lagu helo muuqaalka kobaca afraadku waa inuu isticmaalo doofaarrada! Waad ku guuleysan kartaa qaab kasta, midab, qaab, iyo qaabka curlka ah ee aad rabto xoogaa dadaal yar ku rakibida afduubka Afrikada afduubka ah sida tan.
Waxaan kugula talin lahaa in aad tijaabiso Wajiyadaha Wajiga ah ee Nubiyaanka ah Waxaad qaabeyn kartaa oo qeexaysaa curlaha si la mid ah sida aad u sameyn lahayd kordhin sida isticmaalka timo afro ah. Waxaad samayn kartaa maydhasho oo aadna u socon kartaa goobta qaabka loo yaqaan "twist out out" iyo Bantu isma soo baxa rakibidda timo afro ah.
DIYAAR AYAA LAGU DHACAY
Waa inaad si firfircoon u tababarataa timahaaga si aad uga dhigto mid la maareyn karo inta lagu jiro xilliyada caalamiga ah. Si kastaba ha noqotee, xagaaga, waxa muuqata in qaabka ilaalinta ee dabacsan uu noqon karo wadada ugu fiican. Inkastoo tani ay noqon karto kiiska, dhammaanteen waan jecelnahay inaan muujinno kinkayga kinkayga sheyga! Yaa doonaya in la ilaaliyo qaabka ilaalinta waqtiga oo dhan? Haddii aad rabto inaad timo afro Afro Curly ah ama aad adagtahay xagaaga xagaaga, iska hubi inaad ilaaliso dhamaan dhinacyada qoyan.
Isticmaalidda tayada tayada ayaa socon karta wakhti dheer. Aan wajahno, timo timahaaga ayaa noqon karta jiido, gaar ahaan haddii uu qalalan yahay ama aanad u isticmaalin. Si kastaba ha noqotee, qadarka saxda ah ee joogtada ah, waxaad dabiici ahaan u bilaabi kartaa inaad noqotid mid sii waaraya si aad u noqoto mid raaxo leh qaabka xitaa markaad tagto. Si kastaba ha ahaatee, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho shuruudaha fasaxa ee ku haboon ee ku habboon qaabka lakabkaaga oo kaliya oo ka soo qaadaya xididka. Si tartiib ah uga dooro xididka iyo kor u qaad. Tani waxay abuuri doontaa mug badan oo ka caawi timahaaga inay istaagaan si ay u abuuraan muuqaal fool-xumo ah! Haddii timahaagu dhuuban yahay waxaad heli doontaa midka ugu fiican afro adigoo ku siinaya timahaaga si tartiib ah uga soo riixa xididada ilaa bartamaha timahaaga midig ka dib markaad ka soo baxdid ama Bantu iskaga tag.
Waxaan rajeynayaa inay taasi caawineyso. Ilaa wakhtiga xiga!
Waxyaabaha Daryeelka Sarreeya ee ugu Wanaagsan ee loogu talagalay Nimanka Black
Sida loo sameeyo Curlformers iyo Waveformers
Miyaad ka fekeraysaa inaad isbariiso? Waa kuwan talooyin!